Laser Cutting ka wokuvimbela Materials - Wuhan Golden Laser Co., Ltd
Laser Cutting ka wokuvimbela Izinto
Laser ahlabayo is esikhundleni ummese bendabuko ukusika kancane kancane. Ngokungafani iningi izinto okungezona metal, ukwahlukanisa izinto zidinga ukusebenza elilungile kanye nokuqina. Ukuze kuhlangatshezwane ezehlukile kahle ezishisayo, namandla high, isisindo ongaphakeme futhi ukuncipha ongaphakeme okushisa ngokweqile, ukubunjwa ezishisayo ukwahlukanisa impahla iyinkimbinkimbi, noma ngaphezulu ngokuqondile ukuchaza - nzima ukusika. Ucwaningo nobuchwepheshe Ithimba lethu yasungulwa ekhethekile laser cutting umshini onamandla ezanele izici ezinjalo.
Izinto zokuvala umoya izinto kabanzi izinhlelo zokusebenza ezahlukene:
Reciprocating izinjini, igesi kanye umusi abaphehla ugesi, ipayipi ukwahlukanisa, ukwahlukanisa zezimboni, ukwahlukanisa zasolwandle, Aerospace ukwahlukanisa, imoto ukwahlukanisa, futhi njll
Kunezinhlobo ezahlukene ukwahlukanisa izinto:
Kwangezikhathi, asbestos indwangu, ucwecwe njll
Ejwayelekile wokuvimbela Izinto Izicelo:
izinjini Reciprocating, Gas & umusi abaphehla ugesi, Exhaust izinhlelo, Engine linezingxenye, Pipe ukwahlukanisa, Industrial ukwahlukanisa, Marine ukwahlukanisa, Aerospace ukwahlukanisa, Acoustic ukwahlukanisa
Fiberglass, amaminerali bezimvu, cellulose, Wekhethelo Zesayensi Ezingesilo iqiniso, polystyrene, Polyisocyanurate, Polyurethane, vermiculite futhi Perlite, Foam Urea-formaldehyde, Cementitious Foam, phenolic Foam, wokuvimbela facings
Amasampula laser cutting ukwahlukanisa izinto:
ukubaluleka letibalulekile laser cutting for ukwahlukanisa izinto:
Ukuvikelwa Environmental, akukho uthuli ahlabayo noma fraying.
Ukuvikela impilo yomjaho, ukunciphisa eziyingozi uthuli ngommese ahlabayo.
Igcina izindleko kanye okudlekayo izindwani ukugqoka izindleko.
Sincoma laser umshini ezilandelayo ukuze ahlabayo ukwahlukanisa izinto:
• Gear Rack Driven
• esinejubane, ngokunemba high
• Umshini elihambayo
• izindawo ezihlukahlukene zokusebenza ozikhethela
Okuningi mayelana nomkhiqizo
CO₂ ingilazi Laser / CO₂ RF Laser
Ubude 2000mm ~ 13000mm, Ububanzi 1600mm ~ 3200mm
nendwangu Technical, izindwangu zezimboni, njll
Buka laser cutting umshini for ukwahlukanisa izinto isinyathelo!
Uma ufuna ulwazi oluthe xaxa ( umbiko ukuhlolwa isampula, ikhasimende imephu ukusatshalaliswa, isicelo demo ... ), sicela uxhumane nathi manje!